दलित भएकै कारण कहिले सम्म ज्या,,न गुमाउन गर्ने हो ? प्रेमिकाले बोलाएर भेट्न भएका नवराज नदिमा भेटिएपछि... - Filmy News Portal Of Nepal
अहिलेको समाजमा पनि जातकै कारण कसैले ज्यान गुमाउन पर्छ भने त्यो भन्दा दु खद घ टना के होला र ? देशमा कोरोनाको क हर छ, छिमेकी देश भारतले सीमा मिचेको पी डा बेग्लै छ । र, यही समय दलित भएकै कारण जाजरकोटमा ज्या न गुमाउन परेको दृष्टान्तले सबै नेपालको मन रु वाएको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ४ खलंगाका नवराज विक र रुकुमपश्चिमको चौरजहारीकी सुष्मा मल्लबीच तीन वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध थियो ।
यो विषय विस्तारै दुबैतिरका परिवारले थाहा पाए । केटीतर्फका परिवारले दलित केटासँगको प्रेम सम्बन्ध कुनै पनि हालतमा अघि बढ्न नसक्ने भन्दै पटक पटक चे तावनी दिँदै आएको थियो । तर, गहिरो माया बसेपछि उनीहरु एकअर्काबिना बाँच्न नसक्ने भन्दै विवाह बन्धनमा बाँ धिने निर्णयमा पुगे । केटाको घरमासमेत केटी आउजाउ गर्थिन् । आफ्नो प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने सल्लाहबमोजिम सुष्माकै आग्रहमा नवराज साथीहरुसँग केटीको गाउँ सोती पुगे ।
एक्लै गए खतरा हुने ठानेरै १८ जना साथी लिएर गएका नवराजलाई अन्नतः साथीहरुले पनि जोगाउन सकेनन् । स्थानीयको आ क्रम णमा नवराजसहित दुईजनाको मृ त्यु भएको खबर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा जाजरकोटबाट राजेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् । बेहुली लिन गएका जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ४ का २१ वर्षीय नवराज विकको श व शुक्रबार बिहान भेरी नदी किनारमा भेटियो ।
प्रेमिकाको आग्रहमा बेहुली लिन गएका नवराजसहितको टोलीमाथि वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित सोतीका गाउँलेले आ क्रमण गरे । १२ जनालाई गाउँलेले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाए । केटीका आमाबुवाले गाउँले बोलाएर आक्रमण गरी लखेटेर ह त्या गरेको पीडित पक्षको भनाई छ । घटनापछि चौरजहारी नगरपालिका ८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, केटीका बुबा वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्लसहित पाँच जनालाई प्रहरीले नि यन्त्रणमा लिएको छ ।
भेरी ४ का गणेश विक, भेरी ११ का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही, सन्दीप विक र चौरजहारी १ का टीकाराम सुनार वे पत्ता छन् । तीमध्ये एक जनाको श व फेला परेको छ । नवराजसहितको युवा समूहलाई तल्लो जातको केटाले ठकुरीकी छोरी भगाउन खोजेको भन्दै स्थानीयले आ क्रमण गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।
तर, केटी पक्षले केटीको उमेर नपुगेको र केटीले बिहेका लागि अस्वीकार गरे पनि ज ब र्जस्ती लान खोज्दा वि वा द भएको दाबी गरेका छन् । ‘दुलही लिन गएको छोरा ला श बनेर आयो,’ बाबु मोहन विकले भने, ‘घटना सुनेदेखि आमा बेहोस् छिन् । पुलिसको जागिर खाएर बिहे गर्छु भन्थ्यो । पापीहरुले कलिलैमा ह त्या गरिदिए ।’ घ टनाका दोषीलाई हदैसम्मको का र बाही होस भन्ने आम नेपालीले चाहेका छन् ।